Umyalezo Wamafu Uhlanganisa Ukuthumela Umlayezo Okuqukethwe Okungaphakathi Kwesitolo | Martech Zone
I-SmartFocus kumenyezelwe ku- I-World World Congress namuhla ukuthi izobe ihlinzeka ngamabhakoni okuqala emhlabeni. Ama-beacon abonakalayo avumela ukumaketha okususelwa ebusosheni ngaphandle kokuhlanganiswa okunzima kwe-hardware noma ukugcinwa. Izinkampani zingadala imilayezo yendawo emincane ukuze inike amandla umuzwa wokuqukethwe usebenzisa nje uhlelo lwaphansi.
Ama-SmartFocus's Umlayezo Cloud ubuchwepheshe bunikeza abathengisi bomkhiqizo umbono ophelele ngamakhasimende abo, okubenza bakwazi ukuletha ukuhlangana kokumaketha okwenzelwe wena ngokwengeziwe kufaka phakathi okunikezwayo okukhokhwayo, izinkokhelo, ukwethembeka nokubuyekezwa.
Wonke amakhasimende asohambweni lwawo olwehlukile. Izisusa zokuzama, ukuthenga, noma ukuhlala ushintsho oluqotho kuye ngomuntu owenza ukukhetha. Iselula inamandla okufinyelela okungu-24/7 'kusilawuli kude' sempilo yekhasimende lakho kanye nekhono lokunika amandla imiyalezo yokumaketha eyenziwe yaba ngeyakho kangcono kunanoma iyiphi enye indlela. Rob Mullen, isikhulu esiphezulu ku-SmartFocus
Ifu Lomlayezo icubungula idatha enkulu ukwenza ngezifiso ngokuzenzakalela nokuqukethwe kokuqukethwe kuwo wonke amakhasimende. Kusetshenziswa izinto eziningi kubandakanya indawo, isimo sezulu, iminyaka yamakhasimende nobulili, izinhlobo eziyizintandokazi nemikhiqizo, umlando wokuphequlula iwebhu, indlela yokuziphatha yokuthenga edlule nezinqola ezilahliwe, i-The Message Cloud iyalalela futhi ifunde kumakhasimende.
Umthengisi omkhulu wamathoyizi wase-UK, uMjabulisi, isebenzisa i-SmartFocus's Cloud Cloud.
I-SmartFocus isiza ukwenza ulwazi lwethu lwamakhasimende lube ngcono kakhulu, kungakhathalekile ukuthi isiphi isiteshi esisisebenzisayo, futhi i-SmartFocus Message Cloud iqinisekisa ukuthi mina nethimba lami singanikela ngomuzwa ophelele womsebenzisi ngaso sonke isikhathi. Ukuphindaphinda ulwazi lwethu lwasesitolo lapho ngamunye wamakhasimende ethu evakashela iwebhusayithi yethu noma ethola omunye wemiyalezo yethu yokumaketha kubalulekile kithi. Isixazululo se-SmartFocus sinikeze wonke amakhono esiwadinga kungxenyekazi eyodwa, ephelele. UPhil Geary, Isikhulu Esiphezulu Sezokukhangisa Kwezokuzijabulisa
I-SmartFocus ungumsunguli ekuthumeleni imiyalezo nokuxhumana, enika amandla izinhlobo ezinkulu zomhlaba - kufaka phakathi i-Nestlé, i-Mercedes-Benz, i-Macy's ne-Levi kanye nokuqonda nokuxhumana ngokuseduze nabathengi banamuhla abaxhunyiwe; noma ngabe lokho kwenziwa ngewebhu, iselula, i-imeyili noma iziteshi zenhlalo. Ngesixazululo se-The Message Cloud, i-SmartFocus iyalalela futhi ifunde kumakhasimende asebenzisa ubuchule obunelungelo lobunikazi namathuluzi wokuthengisa asuselwa endaweni ahlukile. Besebenzisa i-The Message Cloud, amakhasimende e-SmartFocus anemininingwane ecebile, ubuhlakani kanye namathuluzi wokuzibandakanya okuhlukile kokuqukethwe, nganoma yisiphi isiteshi sedijithali.
Tags: beaconukumaketha kwezimoingqungquthela yomhlaba ehambayoukusondelana nokumakethatekutsengisai-smartfocusifu lomlayezo